होम अफिसबाट बिक्री भिडियो सल्लाहहरू Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 26, २०२० मंगलवार, मार्च 2, 2021 Douglas Karr
हालको स With्कटसँगै, व्यावसायिक पेशागतहरूले आफैंलाई एक्लोन्टस र घरबाट काम गरिरहेछन्, सम्मेलन, बिक्री कल, र टोली बैठकहरूको लागि भिडियो रणनीतिहरूमा झुकाव गरिरहेका छन्।
COVID-19 को सकारात्मक परीक्षण गर्ने कसैलाई मेरो एक साथीको संपर्कमा ल्याए पछि म अर्को हप्ताको लागि आफूलाई अलग गरिरहेको छु, त्यसैले मैले तपाईंलाई संचार माध्यमको रूपमा राम्रो लिवरेज भिडियो मद्दत गर्न केही सुझावहरू सँगै राख्ने निर्णय गरें।
गृह कार्यालय भिडियो सल्लाहहरू
अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता संग, तपाईं हरेक संभावना र ग्राहकहरु को चुनौतिहरु को लागी समानुभूतिशील हुनु पर्छ। तपाई प्रत्येक सम्भाव्य र ग्राहकलाई सहयोग गर्ने विश्वासिला स्रोत हुनुपर्दछ। दीर्घकालीन रणनीतिहरू धेरै हदसम्म बेवास्ता भइरहेको छ किनकि कम्पनीहरूले हker्कर गरिरहेको छ र रणनीतिक रूपमा सोच्दछ। भिडियो हामीसँग मानव जडानको साथ केहि दुरीका चुनौतीहरू पार गर्नका लागि एक साधन हो, तर तपाईंले त्यो अनुभवलाई पनि अनुकूलित गर्नुपर्नेछ।
भिडियोको लागि तपाईलाई एक मानसिकता, रसद, मेसेजिंग रणनीति, र प्लेटफर्म को आवश्यक छ को लागी तपाइँको सन्देश को सगाई र प्रभाव अधिकतम गर्न।
अलगाव, तनाव र अनिश्चितताले हामीलाई कसरी हेरीन्छ भनेर असर गर्न सक्छ। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाइँले आफ्नो व्यक्तिगत मानसिकता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ साथै कसरी तपाइँ तपाइँका दर्शकले महसुस गर्नुहुन्छ।
कृतज्ञता - तपाईं भिडियो मा प्राप्त गर्नु अघि, के तपाईं धन्यवाद हुनुहुन्छ मा ध्यान।
व्यायाम - हामी धेरै हदसम्म अस्थिर छौं। आफ्नो टाउको खाली गर्न, तनाव हटाउन, र एन्डोरफिन निर्माण गर्न व्यायाम पाउनुहोस्।
सफलताको लागि ड्रेस गर्नुहोस् यो एक नुहाउने, दाह्री, र सफलता को लागी लुगा लिन को लागी समय हो। यसले तपाइँलाई थप आत्मविश्वास महसुस गराउँदछ र तपाइँको प्राप्तकर्ताले पनि ठूलो प्रभाव प्राप्त गर्नेछ।
दृश्य - सेतो पर्खाल अगाडि नजानुहोस्। तपाईको पछाडि केहि गहिराइ र अर्थहीन र with्ग भएको एक कार्यालय धेरै न्यानो प्रकाशको साथ आमन्त्रित हुनेछ।
गृह कार्यालय भिडियो रसद
तपाईं अडियो गुणवत्ता, भिडियो गुणवत्ता, अवरोधहरू, र कनेक्टिभिटी मुद्दाहरूको साथ हुन लाग्नुभएको कुनै पनि मामिलालाई न्यूनतम गर्नुहोस्। जाँच गर्नुहोस् मेरो घर कार्यालय मैले के लगानी गरेको छु र यो सबै कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नका लागि।
हार्डवायर - भिडियो र अडियोको लागि वाइफाइमा भरोसा नगर्नुहोस्, तपाईंको राउटरबाट तपाईंको ल्यापटपमा अस्थायी केबल चलाउनुहोस्।
आवाज - सुन्नको लागि बाह्य स्पिकरहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, ईयरबड्स प्रयोग गर्नुहोस्अडियो - अडियो कुञ्जी हो, उत्कृष्ट माइक्रोफोन पाउनुहोस् वा पृष्ठभूमिमा आवाज कम गर्न तपाईंको हेडसेट माइक्रोफोन प्रयोग गर्नुहोस्।
ब्रीथ र स्ट्रेच - तपाईंको भिडियो भन्दा पहिले डायाफ्रामेटिक सास प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईं अक्सिजनको लागि भोकाउनुहुने छैन। सुरु गर्नु अघि आफ्नो टाउको र घाँटी तन्काउनुहोस्।
आँखा सम्पर्क - तपाईंको क्यामेरालाई आँखा स्तरमा वा माथि राख्नुहोस् र क्यामेरा भरि हेर्नुहोस्।
अवरोध - तपाईंको फोन र डेस्कटपमा सूचनाहरू बन्द गर्नुहोस्।
व्यवसाय भिडियो संचार रणनीतिहरू
भिडियो एक शक्तिशाली माध्यम हो, तर तपाईंले यसको सामर्थ्यहरूको लागि यसको उपयोग गर्न आवश्यक छ ताकि तपाईं अधिकतम प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ।
ब्रेभिटी- मान्छे को समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाई के भन्न लाग्नु भएको छ अभ्यास गर्नुहोस् र सीधा बिन्दुमा पुग्नुहोस्।
समानुभूति - तपाइँको दर्शकको व्यक्तिगत स्थिति थाहा छैन, तपाइँ हास्यबाट जोगिन सक्नुहुन्छ।
स्रोतहरू साझा गर्नुहोस् - थप जानकारीको लागि जहाँ तपाईंको दर्शक गहिरो आत्म-अनुसन्धान गर्न सक्दछ।
सहयोग प्रस्ताव - तपाईंको संभावना वा ग्राहकलाई अनुगमनको लागि अवसर प्रदान गर्नुहोस्। यो बिक्री छैन!
भिडियो प्लेटफर्मका प्रकारहरू
वेबिनार, सम्मेलन र बैठक प्लेटफर्महरू - जूम, Uberconferences, र गुगल ह्या Hangouts्गआउट्स सबै महान कन्फरेन्स सफ्टवेयर हुन् १: १ वा १: धेरै बैठकहरू। तिनीहरू रेकर्ड गर्न र एक विशाल श्रोतालाई पदोन्नति गर्न सकिन्छ।
सामाजिक मीडिया लाइभ प्लेटफार्मों - फेसबुक र युट्यूब लाइभ ठूलो दर्शकहरु संग साझा को लागी शानदार सामाजिक वीडियो प्लेटफार्म हो।
बिक्री र ईमेल भिडियो प्लेटफार्महरू - तान, डब, बमबम्ब, कोभिडियो, वनमोब तपाइँको स्क्रिन र क्यामेराको साथ पूर्व-रेकर्ड गर्न सक्षम गर्नुहोस्। ईमेलमा एनिमेसनहरू पठाउनुहोस्, सचेत हुनुहोस्, र तपाईंको CRM सँग एकीकृत गर्नुहोस्।
भिडियो होस्टिंग - यूट्यूब अझै दोस्रो दोस्रो खोज इञ्जिन हो! यसलाई त्यहाँ राख्नुहोस् र अनुकूलन गर्नुहोस्। Vimeo, Wistia, र अन्य व्यापार प्लेटफर्महरू उत्कृष्ट छन्।
सामाजिक संजाल - लिंक्डइन, ट्विटर, इन्स्टाग्राम सबैले तपाईंलाई आफ्नो सबै सामाजिक च्यानलहरूको लाभ उठाउनको लागि भिडियोहरू तिनीहरूका स्वदेशी ढाँचामा साझेदारी र प्रचार गर्न अनुमति दिन्छ। सावधान रहनुहोस् कि प्रत्येक प्लेटफर्ममा तपाईंको भिडियोको लम्बाइमा सीमितताहरू छन्।
म आशा गर्दछु कि यसले केहि सहयोग प्रदान गर्दछ जब तपाईं घरबाट भिडियोको साथ यस संकटमा काम गर्नुहुन्छ!
टैग: google hangoutsघर कार्यालयमार्केटिंग Webinarभिडियो सम्मेलनभिडियो मानसिकताभिडियो प्लेटफार्महरूभिडियो रणनीतिभिडियो सल्लाहहरूभिडियो तरिकाहरू